NLD – Think Before You TRUST
ဒီကနေ့ ဇွန် ၁၄ ရက်နေ့ ​မော်လမြိုင်မှာ မိစ္ဆာပါတီ NLD ဆိုတဲ့ ​ကြွေး​ကြော်သံ​တွေနဲ့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတု
NLD June 14, 2021
ဒီသတင်းကို ဇွန်၊ ၁၄ရက်​နေ့(ယ​နေ့) Myanmarlocalnews-media ဆိုတဲ့ သတင်းမီဒီယာနာမည်ခံ Facebook page က စတင်ဖြန့်​ဝေထားခဲ့ပါတယ်။ သတင်းထဲမှာဆိုရင် “နိုင်ငံ​တော်တည်ငြိမ်​အေးချမ်း​ရေးကို ​နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီး​နေတဲ့ CRPH, NUG နဲ့ PDF အကြမ်းဖက်​သောင်းကျန်သူများအား ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချပွဲကို မွန်ပြည်နယ်၊ ​မော်လမြိုင်မြို့နယ်မှာ ဒီ​နေ့၊ ဇွန်၊ ၁၄ ရက်​နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်” လို့ ​ဖော်ပြထားပါတယ်။
NLD ပါတီအပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းဖို့ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်မှတ်ထိုး​ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတု
NLD May 15, 2021
ဒီသတင်းတုဟာ ဒီ​နေ့ မနက်ပိုင်းမှာပဲ အများအပြားပျံ့နှံ့လာ​နေတာ​တွေ့ရပါတယ်။ သတင်းထဲမှာဆိုရင် ​ဒေါ်​အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ NLD ပါတီဖျက်သိမ်း​ကြောင်း လက်မှတ်ထိုး​ပေးခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ​ရွေး​ကောက်ပွဲရလာဒ်ကိုလည်း တရားမဝင်ပါဟု လက်မှတ်​ရေးထိုးထားတယ်လို့ ​ဖော်ပြထားပါတယ်။
NLD ပါတီမှ မွတ်ဆလင်ပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံကို ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတု
NLD June 10, 2020
ဇွန်လဆန်းပိုင်းမှ ပြန့်နှံ့လာတဲ့ “မွတ်ဆလင်ပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံကို NLD ပါတီက ကူညီမယ်” ဆိုတဲ့ သတင်းတုအကြောင်းကို တွေးပြီးမှယုံက ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
NLD November 28, 2018
သတင်းတု၊သတင်းမှားတွေက ဒီရက်ပိုင်းအရမ်းကိုပျံ့နှံ့လာနေပါတယ်။တွေးပြီးမှယုံရဲ့တွေ့ရှိချက်အရ သတင်းတုဖန်တီးသူတွေ၊ဖြန့်ဝေသူတွေဟာ သတင်းအသိပညာနိမ့်ပါးတဲ့ facebook အသုံးပြုသူတွေဆီကို ဦးတည်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ လူတွေကို သူတို့ရဲ့သတင်းတုတွေနဲ့ အထင်အမြင်တွေလွဲမှားအောင် အတွေးအခေါ်တွေ မှားယွင်းအောင် ပုံဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
NLD လူငယ်တွေနဲ့ အာရဗီကျောင်းသားတွေ တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတု
NLD November 24, 2018
သတင်းတုတွေက ဦးတည်ချက်တစ်ခု၊ ပန်းတိုင်တစ်ခု၊ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့သွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ တွေးပြီးမှယုံက ထပ်ခါထပ်ခါပြောခဲ့ပါတယ်နော်။ ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတင် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် လုပ်နေတဲ့သတင်းတုပို့စ်တွေ တော်တော်များများတွေ့လာရပါတယ်။
ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်းက နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေ သန်း ၆၀၀၀ ကို သုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှား
NLD November 7, 2018
သူငယ်ချင်းတို့ရေ…. ဒီရက်ပိုင်း Admin တို့လည်းမအားတာနဲ့ သတင်းအမှားတွေကို မတုံ့ပြန်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အခုအချိန်လေးနည်းနည်းအားတာနဲ့ ခဏလေးလိုက်ကြည့်မိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သတင်းအတုတစ်ခုကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲဖမ်းမိလိုက်ပါတယ်။ NLD ပါတီက ဗဟိုသုတေသနအတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်းက နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေ သန်း၆၀၀၀ကို သုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားကို ဖြန်ဖြူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းအတုကို Group တွေနဲ့ သတင်းအတုဖြန့်ဖြူးတယ်လို့ယူဆရတဲ့ Page တွေ Account အတုတွေကနေ ဖြန့်ဖြူးတာဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းခြေ Share လုပ်တဲ့အရေအတွက် ၃၀၀ ဝန်းကျင်အထိရှိလာပါပြီ။ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ကနေစပြီး ဒီသတင်းအတုကို ဖြန့်ဖြူးနေကြတာဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့အထိ ဖြန့်ဖြူးနေတုန်းပဲဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်… သူငယ်ချင်းတို့ မယုံကြည်မိအောင် တွေးပြီးမှယုံက ဖော်ထုတ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (၁) သတင်းတုမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Myanmar News သတင်းဌာနဆိုတာ တကယ်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ (၂) ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်းနဲ့ […]
NLD October 29, 2018
သူငယ်ချင်းတို့ရေ…. သတင်းအတုတွေက မရပ်မနားပျံ့နှံ့လို့နေပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီက ဗဟိုသုတေသနအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်းကို ကာမလိမ်လည်ရယူတယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းတုတစ်ပုဒ်အကြောင်းကို တွေးပြီးမှယုံက ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) အောက်တိုဘာ ၂၉ရက် ညနေပိုင်းက တင်တဲ့ ဒီသတင်းအတုမှာ NLD ပါတီ ဗဟိုသုတေသနအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်းက ကာမလိမ်လည်ရယူတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ပုံကိုပါ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တွေးပြီးမှယုံက တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ အဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဓာတ်ပုံဟာ ဖိလစ်ပိုင်သတင်းတစ်ပုဒ်က သတင်းဓာတ်ပုံသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။(တွေးပြီးမှယုံက ဒီသတင်းတုအကြောင်းရေးနေစဉ် အတောအတွင်းမှာတင် facebook က ဒီသတင်းတုကို ဖယ်ရှားလိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်) (၂) လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်လောက်က ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်းဟာ NLD အစိုးရကို ပြိုလဲအောင်စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူ ၃၀၀၀ လောက်ရှိတဲ့အင်အားကြီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်လို့ တရားဝင်သတင်းဌာနအချို့မှာ ပြောကြားထားတာရှိပြီး ဒီပြောစကားကိုအခြေပြုထားတဲ့သတင်းတွေရဲ့နောက်မှာ ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်းကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တဲ့ အခုလိုသတင်းတုတွေပေါ်ပေါက်လာတာလို့လည်း တွေးပြီးမှယုံကသုံးသပ်ပါတယ်။ […]
ပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က သိန်း၂၀ ပေးပြီး ကျေးရွာတွေကိုမဲဆွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတု
NLD October 11, 2018
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က သိန်း၂၀ပေးပြီး ကျေးရွာတွေကို သွားကာ မဲဆွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတု တစ်ပုဒ်အကြောင်းကို တွေးပြီးမှယုံက ဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းတုကိုလည်း အမြဲသတင်းတုတွေတင်နေကျ VOM ဆိုတဲ့ Facebook Page ကနေတင်နေတာဖြစ်ပြီးLike ပြုလုပ်သူ ၅၀၀ ကျော် …..
NLD ပါတီတံဆိပ်နှင့်ကြေညာချက် အတုဖြစ်နေ
NLD June 23, 2018
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဇွန်လ (၁၉) နေ့ရက်စွဲဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးလှထွန်းဦးကို ဥက္ကဌရာထူးမှ အပြီးသတ်ထုတ်မယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်အတုထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြေညာချက်အတုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကြေညာချက်တစ်စောင်မှာ တွေ့ရတဲ့ အထောက်အထားတွေနဲ့ လုပ်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုကြေညာချက်အတုတွေဟာ ရုတ်တရက် သူငယ်ချင်းတို့ စဉ်းစားလို့မရအောင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီကြေညာချက်ကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်ထားတဲ့ Bago Information Committee – NLD page ကဖော်ပြထားတယ့် ပုံကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ဒီလိုကြေညာချက် အတုတွေကို သတိထားရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ #တွေးပြီးမှယုံ
မနှစ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာကို ဒီနှစ်ရက်စွဲနဲ့ ပြန်တင်လိုက်တဲ့ သတင်းတု
NLD May 11, 2018
သတင်းတွေကို ဖတ်တဲ့အခါ၊ စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဘယ် နေရာ၊ ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်၊ ဘယ်သူ့ပြောစကား စတာတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့ တွေးပီးမှယုံကနေ ခဏခဏ ပြောပြဖူးပါတယ်။ သတင်းတွေမှာ သတင်းတုလုပ်လို့အကောင်းဆုံးက …
Proudly powered by WordPress Theme: My Custom Theme.